Fotsaboana covid-19/Tanàna Voara :: Hatokana ireo marary manaiky tsindrona sy vitamina C • AoRaha
Nanomboka omaly, teny amin’ny tanàna Voara Andohatapenaka, ny fitsaboana hanaraha-maso ny fiasan’ny fanafody na « Essai Clinique » amin’ny tsindrona Artesunate IV sy ny vitamina C ho an’ireo mitondra ny tsimok’aretin’ny Covid-19 eto Madagasikara. Notokanana tamin’ny fomba ofisialy, tamin’izany, ny Ivontoerana manaraka ny fenitrairaisam- pirenena handraisana an-tanana ireo mila fitiliana sy fitsaboana momba ny Covid-19 na CMC eny an-toerana.
Mbola eny an-toerana ihany aloha no hampiasana an’ity fenitra fitsaboana fahatelo ity. Nambaran’ny Dr Rakotosaona Rianasoambolanoro, mpikambana amin’ny komity Siantifika, fa ny marary manaiky an-tsitrapo ihany no manaraka an’io andrana io. Mandritra ny fito andro no fampiasana an’ireo fanafody roa, izay efa fantatra fa manaraka ny fenitra, ireo. Rehefa tapitra izay fotoana izay ka mbola tsy sitrana ilay olona dia mbola misy fanaraha-maso mandritra ny telo herinandro eny amin’ny CMC.
« Androany (Ndrl: omaly) no hanambaràna amin’ny fomba ofisialy ny fanaovana ny fitsaboana hanaraha-maso ny fiasan’ny fanafody Artesunate IV sy ny Vitamine C, izay fenitra ara-pitsaboana fahatelo eto Madagasikara. Fiaraha-miasa amin’ny profesora malagasy miaraka amin’ny firenena maro, toy ny profesora avy ao amin’ny nosy Maorisy, mpitsabo avy any Amerika ary mpitsabo any Thailande izany. Vokatra avy amin’ny Artemesia, izay navadika ho tsindrona io fenitra fahatelo io. Vokatra efa nisy izany fa tsy isika no nanao azy », hoy ny Filohan’ny Repoblika, Rajoelina Andry.
Nohamafisiny fa tao anatin’ny roa volana no nanomanana an’izao fenitra ara-pitsaboana fahatelo izao. I Madagasikara no firenena voalohany aty Afrika nanana soson-kevitra hanao ny andrana tsindrona mikasika ny ady amin’ny Covid-19.
Misy ny solontena avy amin’ny Vondrona iraisampirenena misahana ny fahasalamana (OMS) hanaramaso amin’ny fanatanterahana ny andrana amin’ny alalan’ity lalam-pitsaboana fahatelo ity, hoy ny Fatima Ndiaye, solontena maharitry ny OMS.
Fiahiana aretina :: Nifanotofana ny fikasana hanao fitiliana
Fijoroana vavolombelona :: Mpitsabo sady minisitra teo aloha voan’ny Covid-19 koa